Bandhigan rasmiga ah wuxuu muujinayaa naqshadda Galaxy S7 Edge | Androidsis
Alfonso ee Miraha | | Samsung
Saacad ka hor kuma tusin mid sawir muujinaya kamaradda dambe ee Samsung Galaxy S7, marka lagu daro faahfaahin aad u xiiso badan oo ku saabsan baytarigeeda. Oo hadda waa waqtigii aan ku tusi lahaa sawir cusub, laakiin laga bilaabo Samsung Galaxy S7 Edge.
Waana in muuqaal cusub oo Samsung Galaxy S7 Edge ah oo qalin ah hadda la sifeeyey iyo, maxaan isku khaldeynaa, runti waxay u egtahay mid wanaagsan. Ma xaqiijin karno in sawirkani uu yahay mid dhab ah, laakiin marka la tixgelinayo halka uu ka daatay, Evan Blass sida fiican loo yaqaan @evleaks, ugu yaraan waan aaminsanahay.
Samsung Galaxy S7 Edge, tani waxay noqon doontaa naqshadeynta taleefanka cusub oo leh shaashad laba jibbaaran
Saxafiga caanka ah, ahna khabiirka xogaha, ayaa bartiisa Twitter-ka kusoo daabacay muuqaalka Galaxy S7 Edge oo qalin ah kuna jira fariin: "Laga yaabee inuu yahay sharadka ugu fiican ee Galaxy ku shaqeeya Android 6.0 M". Ereyadani waxay jawaab u yihiin wadahadal aad la yeelatay isticmaale ku saabsan inta ay qaadanayso Samsung si ay qalabkooda ugu cusboonaysiiyaan nooca ugu dambeeya ee nidaamka hawlgalka Google.
Isaguna ma ahan mid aad u qaldan, markuu arko sida wanaagsan ee midabka cawlku ugu muuqdo Galaxy S7 Edge. Intaas waxaa sii dheer, macluumaadka cusub ee aan ka helnay batterigiisa, oo ku dhowaad xaqiijinaya in ugu dambeyn uu yeelan doono ismaamul qiyaastii laba maalmood ah, sidaan kuu ogeysiinnay waqtigaas, waxaa iska cad in Samsung ay saxayso khaladaadka moodelladii hore.
Xusuusnow in la filayo in Samsung Galaxy S7 iyo Galaxy S7 Edge ay yeelan doonaan a 5.1 inch screen waxaa sameeyay guddi Super AMOLED, iyo SUPER OLED tusaalaha qalooca, kaas oo gaari doona xalka 2560 x 1980 pixels (Bawdada HD).
Waxaa jiri doona qaabeyn kala duwan Samsung Galaxy S7 iyo Galaxy S7 Edge, iyadoo kuxiran processor-ka la isticmaalo. Sidan oo kale, waxaa jiri doona nooc leh SoC Qualcomm Snapdragon 820, waxay u egtahay nooca Yurub, iyo terminal kale oo adeegsan doona xalalka Samsung, Chipset-ka Exynos 9980.
Inta soo hartay, labada noocba waxay lahaan doonaan 4 GB oo nooca DDR4 ah, kamaradda ugu weyn oo ka kooban a 13 gaspipi lens oo leh tiknoolajiyadda BRITECELL, qaabeyn kala duwan oo loogu talagalay keydinta gudaha, taas oo aan rajeyneyno in lagu ballaarin karo iyada oo loo marayo booska kaarka micro SD.
Sidaad horeyba u ogayd inay jiri doonaan laba nooc, kuwa caadiga ah ee Samsung Galaxy S7 iyo Galaxy S7 Edge. Farsamo ahaan isku mid ayey ahaan doonaan, in kastoo qaabka leh shaashadda qalooca ayaa yeelan doona 3.600 batari MahHalka shirkadda caadiga ah ee Samsung Galaxy S7 ay lahaan doonto 3.000 mAh baytari.
Maxaad u maleyneysaa naqshadda Samsung Galaxy S7 Edge?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy S7 Edge oo midabkeedu yahay qalin ayaa runtii u muuqda mid fiican
Dhab ahaan waa isku mid sida s6
mid ka mid ah sawirada daadatay waxay umuuqataa caag gadaasheeda
Waxaan u arkaa inay quruxsan tahay! Midabkaasi aad buu ugu habboon yahay isaga! Aynu aragno haddii nooca lagu daray oo leh shaashad weyn uu soo baxo hehe! Salaan!
Ku jawaab Itimad
Yooab ramos dijo
Taasi ma dooddaada ugufiican baa?
Jawaab ku sii Yooab Ramos